Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi Ukuya eYurophu kubuya emuva esikhathini ezweni elakhiwe lasezigodlweni, amahlathi, nemvelo enhle kakhulu nezimpophoma. Ukuthi uya e-Italy noma eSwitzerland, ukuhlela a 2 uhambo lwezinyanga ezingama-euro, noma ube nesonto izwe elilodwa laseYurophu,…
Isikhathi sokufunda: 6 amaminithi Ukuhlala usesimweni ngenkathi uhambela ngaphandle kokungabaza kuyinselele. Ukudla okulingayo kuhlala kunikezwa. Lokhu kuhlangene nekhefu kwendlela yakho ejwayelekile yokuzivocavoca evame ukuholela ekuweni kwenqola yokuqina. Ngakho-ke umuntu uhlala kanjani elungile ngenkathi ehamba? Kuyinto…
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Kepha lapho ehamba kulo iviyo bekolishi, kulungile ngokuphelele ngeke ibe uhambo futhi nje izinto ngesikhathi osithandayo. Touring endaweni kungekho okulindele noma iyiphi ukuhlela ngaphambi empeleni indlela engcono kakhulu ukuthola ingcebo efihliweyo. It leaves enough room for…
Isikhathi sokufunda: 2 amaminithi Imikhaya enezingane izingane, Ukugibela nezingane esitimeleni kungaba kokubili ezijabulisayo futhi ezingabizi ukuhamba. Futhi mhlawumbe ukhululekile kakhulu futhi okungenani ezicindezelayo lapho uhambela nezingane. Thina yazi ukuhamba nezingane is edangalisayo kungakhathaliseki ukuthi…